पैसा छैन भन्दै रोग नपाल्नुस् है ! काठमाण्डौको एउटा अस्पतालमा एक सय रुपैयाँमै उपचार हुन्छ । — ''समर्पण मिडिया''
पैसा छैन भन्दै रोग नपाल्नुस् है ! काठमाण्डौको एउटा अस्पतालमा एक सय रुपैयाँमै उपचार हुन्छ ।
२४, चैत २०७५
काठमाडौं, २४ चैत : न्युन आय भएका व्यक्तिहरु धेरै पैसा लाग्ने भयले अस्पताल जान डराउँछन् । र शरिरमा रोग पालेर बस्ने गर्छन् । बिरामीलाई यस्तो अवस्थाबाट मुक्त गर्न यो अस्पताल खोलिएको हो । बाँसबाट बनाईएको अस्पताल, बाहिरबाट हेर्दा कुनै कटेज होटल जस्तो चिटिक्क देखिन्छ । यहाँ उपचार गराउन एक सय रुपैया भन्दा बढि शुल्क तिर्नु पर्दैन् ।
अस्पताल गएको असार २३ गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालले ओपीडी सेवा मात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ । र, पनि दैनिक करिब २७ सय जना बिरामीले अस्पतालबाट सेवा लिईरहेका छन् ।हाँस्य कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य यस अस्पतालका संरक्षक हुन् ।र, यो कथा समता अस्पतालको हो ।Wide khabar बाट
यस्ता छन् नेपाली डाक्टर : बिरामी छोडेर सरकारी डाक्टर आन्दोलनमा
विनासकारी हावाहुरीको कारण घाईते भएका व्यक्तिहरूको निम्ति रक्तदान कार्यक्रम
अस्पतालको सैयामा झटपटाइरहेका बेलायती नागरीक लाई सहयोग गर्ने को हुन यी नेपाली ? (भिडियो सहित)